မင်းမဲ့ စရိုတ်ထင်ရာစိုင်းနေကြသောရဲအရာရှိများ | ngalone
← ချင်းပြည်ရောက် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏
လက်ဖြောင့်သေနတ်သမား လက်ချက်ဖြင့် တပ်ရင်းမှူးကျဆုံးဟု အစိုးရတပ် ထုတ်ပြန် →
ရခိုင်ပြည်နယ် အနောက်ဖက် မောင်တောမြို့မှ ပေးပို့လာတဲ့သတင်းပါ။
ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကြီး နေမျိုးနှင့် မောင် တောမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကျော်မြဝင်း၏ လက်စွဲတော် တပ်ကြပ်ကြီးလှမြင့် တို့မှာ မောင် တောမြို့တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးဖြန့်ဖြူးရောင်းချနိုင် ရန်အတွက် ၄င်းတို့၏လုပ်ငန်းကိုအတားအဆီး ပြုလုပ်မည့် မောင်တောမြို့ရှိ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ပြောင်းရွေ့လိုက်ပြီးယခုအခါတရားမဝင်မူးယစ် ဆေးဝါးများကို မောင်တောမြို့မှ ဘင်္ဂလီကုလား များဖြစ်သော အီတာလီယာ အနောက်ရွာမှ နူရ်ရူ နှင့် မောင်တောမြို့ ၄ ရပ်ကွပ်နေ ဟာရုံး(ခ)စိုးမြင့် တို့နှင့်ပူးပေါင်းပြီးတရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါး(စိတ် ကြွဆေး)များကိုလွတ်လပ်စွာလုပ်ကိုင်နေကြပါသည်။
နူရ်ရူ ဆိုလျှင်လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်လောက်ကမောင် တောမြို့မဈေးတွင် အဟောင်ထည် (ဘေထုပ်) များရောင်းချနေခဲ့သူ ဘင်္ဂလီကုလားတဦးသာဖြစ် ပြီး တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးဖြန့်ဖြူးရောင်းချ ကြောင်းသိသာထင်ရှားသည်မှာ ယခုနေထိုင် သောနေအိမ်နှင့်ခြံဝင်းတန်ဖိုးသည်ပင် သိန်းထောင်ပေါင်းများစွာတန်သောနေအိမ်ဆောက်လုပ်ပြီးနေထိုင်သည်ကိုတွေ့ရသည်မှာ သက်သေပင်ဖြစ်သည်။
၄င်း နှင့်အတူ ဟာရုံး(ခ)စိုးမြင့်မှာလည်း ရွေဇား ကုန်းနားရွာတွင်မထင်မရှားနေထိုင်သည့်ဘဝမှ ယခုအခါ မောင်တောမြို့အမှတ် ၄ ရပ်ကွက်တွင် သိန်းရာပေါင်များစွာတန်ဖိုးရှိသည့်နေအိမ် ဆောက်လုပ်နေထိုင်သည်မှာလည်းသက်သေ သာဓက ပင်ဖြစ်ကြောင်း မောင်တောမြို့သူ/ သားတိုင်းအသိပင်ဖြစ်ကြောင်း။
ယခုအခါတရားမဝင် မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုပြည် နယ်ရဲမှူးကြီးနေမျိုး မောင်တောမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ မှူး ရဲမှူးကျော်မြဝင်း နှင့်သူ၏ငယ်ပေါင်းမိတ်ဆွေ တပည့်ရင်းတပ်ကြပ်ကြီး လှမြင့် တို့ဘင်္ဂလီကု လားများနှင့်လွတ်လပ်စွာလုပ်ကိုင်နေကြကြောင်း သိရှိရပါသည် ။၄င်းတို့ယခုကဲ့သို့တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဖြန့်ဖြူး ရောင်းချနေကြောင်းထင်ရှားသောသက်သေ သာဓကမှာ ၄င်းတို့၏လုပ်ငန်းကိုတားဆီးဟန့် တားမည့် မောင်တောမြို့နယ်မှရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ နှင့်မူးယစ်အထူးဌာနမှတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုမည်သည့် ပြစ်မူတစုံတရာမှမရှိဘဲ မောင်တောမြို့နယ်မှ ပြောင်းရွှေ့လိုက်ခြင်းသည် အဓိက ထင်ရှားသည့် သက်သေဖြစ်ကြောင်း အထက်လူကြီးများသိစေ အပ်ပါသည်။
This entry was posted in သတင်း and tagged သတင်း. Bookmark the permalink.	← ချင်းပြည်ရောက် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏